Shirkadda Dahabshiil Oo Si Buuxda U Fulinaysa Go’aammada lagu Xakamaynayo Sicir-bararka, Abaalmarina Ugu Bushaaraysay Macaamiisha | Baydhabo Online
Mustafe Xiis Cabdi oo ka mid ah masuuliyiinta sare ee shirkadda Dahabshiil ayaa macaamiisha shirkadda ugu bushaareeyay abaalmarino ay kasban doonan “Sidii shirkadda caadada u ahayd in ay macaamiisheeda abaalmarin iyo dhiiri gelin la daba taagnaato waxaanu macaamiisha qiimaha iyo sharafta leh ugu bushaaraynayna in shirkadda Dahabshiil Group macaamiisheeda sharafta leh u diyaarisay barmaamij abaalmarin ah.
Barmaamijka abaalmarinta ah wuxuu ku xidhnaan doona isticmaalka macaamiisha ee adeegyada shirkadda ee ay ka mid yihiin: Kaadhadhka Somtel(Simcard free ah), Akoonnada, isticmaalka Internet-ka, ku shubashada iyo waxyaabahaas oo dhan iyada oo shirkaddu eegayso waxay diyaarisay abaalmarino kala geddisan. Abaalmarintaas waxa ka mid ah in shirkaddu markii u horaysay ee geyiga Somaliland laga bixiyo ay bixin doonto gaadhi cusub oo ah gaadhiga Gaadhi Hyundai oo Brand New ah oo Zero-kilometre ah oo ah baabuurta shirkadda Dahabshiil iibiso oo ah baabuur cusub oo aanay cid kaaga horayn, furihiisana laguu dhiibi doono. Waxa kale oo ku jirta abaalmarinaha shirkaddu bixinayso Simcard free ah oo loo furayo macmiilka Numberka uu doonayo oo Somtel ah oo leh adeegyada 3G / 4G kuna jiraan 4GB Data (Internet oo Free ah) iyo eDahab Account.
Abaalmarinahaas ayay shirkaddu u huraysa macaamiisheeda oo aanu fursaddan uga faa’iidaynayno,” Sidaas ayuu yidhi Mustafe oo intaas raaciyay in abaalmarinaha ay dheer tahay Akoonnada Dahabshiil oo bilaash lagu furayo.